Iindaba - Ungazikhetha njani ezona mpahla zangaphandle zintle?
Ukuphuma ebusika, iindawo ezahlukeneyo, amaxesha ahlukeneyo, iindlela ezahlukeneyo, iminyaka eyahlukeneyo, ukhetho lwangaphandle lwempahla lwahlukile. Ke ukhetha njani?
1. Yazi le migaqo mithathu
Ukusuka ngaphakathi ukuya ngaphandle, zezi: umaleko wokubila-umaleko wobushushu-umaleko womoya. Ngokubanzi, umaleko ojija umbilo sisikipa sangaphantsi okanye isikipa esomisa ngokukhawuleza, umaleko wobushushu yiboya, kwaye umaleko ongangeni moya yingubo okanye ibhatyi esezantsi. Ukwabiwa ngokufanelekileyo kwezi zintlu zontathu kunokwanelisa uninzi lwemisebenzi yokhenketho lwangaphandle. Kwiminyaka yakutshanje, kuye kwavela iibhatyi ezintsha zesoftshell. Olu lukhetho olufanelekileyo, kwaye ikwanazo neempawu zobushushu kunye nomoya. Unganxiba enye ngaphezulu.
2. Khetha iimpahla zakho ngokwexesha nendlela
Umgaqo weengubo ezintathu zokwaleka ngowona mgaqo usisiseko wezemidlalo ebusika yangaphandle. Ukongeza, iimpahla kufuneka zongezwe ngexesha ngokwemeko eyiyo. Ukuba uza kunyuka ixesha elide, yiza nebhatyi. Xa umatsha kwisikhephe, unokuziva ungabandi kakhulu ngenxa yokubila, ukuzilolonga umzimba kunye nobushushu bomzimba. Ngeli xesha, musa ukunxiba iibhatyi kude kube uyaphumla endleleni okanye enkampini ukugcina ubushushu.
3. Khetha iimpahla ezifanelekileyo iminyaka eyahlukeneyo
Abantu beminyaka eyahlukeneyo banxiba ngokwahlukileyo xa bephuma. Xa abantu abadala bedlala imidlalo yangaphandle, kufuneka banxibe iindawo ezininzi ukuze bafudumale. Iimpahla ezininzi ezomeleleyo zinamandla okugcina ubushushu ukodlula iimpahla ezinohlu olunye. Ukongeza, banokuthatha iimpahla ezininzi xa besiva kushushu ngexesha lokuzilolonga. Ukuba awufuni ukunxiba iingubo ezininzi zeempahla, unokukhetha uboya kunye neebhatyi ezemidlalo ezibini okanye ibhatyi enewindows. Zama ukunganxibi iijezi kunye neebhatyi ezantsi ngexesha lezemidlalo yangaphandle, kuba iijezi akukho lula ukuba zome emanzini kwaye zinzima. Phantsi iibhatyi zifudumele kodwa aziphefumli.
Abantwana akufuneki banxibe iimpahla zangaphantsi ezishinyeneyo kumaleko angaphakathi angaphandle. Impahla yangaphantsi yomqhaphu eqhelekileyo yanele. Uluhlu olufudumeleyo lunokunxitywa ngengubo ye-cashmere + ivesti yekheshi okanye ibhatyi encinci enephedi.